Maalinta: Abriil 4, 2020
Wadada gawaarida dadweynaha waxaa badalay Dowlada Elazig sababtoo ah xiritaanka Gazi, Hürriyet, gudoomiye Fahri Bey Avenue iyo Bosnia iyo Herzegovina Boulevard oo ay laheyd Maamulka Elazig marka loo eego cabirka cudurada faafa ee Corona. Elazig [More ...]
In dunida iyo Turkey fayruska fidin heesta dheeraad ah maalin walba lagu daro tallaabooyinka cusub in la qaado heerka maxaliga sidoo kale qaatay qaar kamid ah go'aanno ay u kordhiyaan applicability ee qiyaasteeda. Macnaha guud, Gobolka Malatya [More ...]
Shaqada Coronavirus ee booliska ayaa sii socota Antalya Metropolitan Dowlada hoose waxay kordhisay talaabooyinkeeda halganka coronavirus oo halis ku ah caafimaadka bulshada. Kooxaha booliisku waxay si adag uga shaqeeyaan sharciga masaafada bulshada ee gaadiidka dadweynaha iyo kantaroolka qiimaha suuqyada [More ...]
IMM waxay ku meeleeysaa kamaradaha kuleylka ee xarumaha metrooga ee magaalada Istaanbuul iyada oo la eegayo cabirka coronavirus. Rakaab leh qandho aad u sareeya ayaa lagu jiheeyaa xarunta caafimaad ee kuugu dhaw. IMM, oo saameysa adduunka iyo dalkeenna, COVID - 19 [More ...]
Gawaarida Gawaarida Dadweynaha ee Aan Xirneyn ee Izmir Waa Mamnuuc
Duqa Magaalada Magaalada Izmir ee Magaalada caasimada ah Tunç Soyer ayaa ku dhawaaqay inay qaadi doonaan talaabooyin looga hor istaagayo muwaadiniinta inay raacaan gaadiidka dadweynaha iyagoon wejiye laheyn mashiinka cabirka fekerka. Duqa Tunç Soyer wuxuu ka qeyb galay TV maxalli ah Abril 2 [More ...]
Marxaladda koowaad ee Istanbul, kaamirooyinka kuleylka ayaa lagu rakibay seddex saldhig metro. Bukaanka qaba qandho lama saari doono dhulka hoostiisa. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay sheegtey inay u wareegeen dalabka kamaradaha kuleylka ee xarumaha metrooga. Yen wuxuu daba mariyey İBB Madaxweynaha Ekrem [More ...]
Kaararka Gaadiidka Dadweynaha ee Dhallinyarada ka yar 20 sano ayaa lagu baajiyay Ankara; Dowlada hoose ee magaalada Ankara ayaa sheegtay in kaararka rakaabka ee kayar da'da 20 ay si kumeel gaar ah u xiran yihiin isticmaalka gaadiidka dadweynaha marka loo eego cabirrada coronavirus. Korona [More ...]
Maaskarada u qaybiyey Rakaabka Isticmaalaya Gaadiidka Dadweynaha ee Konya; Dowlada hoose ee Konya waxay adeegsaneysaa gaadiidka dadweynaha kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay in ay qasab noqon doonto in xiro maaskaro lagu qaado aagaga shacabka iyadoo la qaadayo talaabooyinka coronavirus. [More ...]
Rakaabka aan Aqoonsiga laheyn Looga Qaadi maayo Gaadiidka Dadweynaha ee Eskişehir; Laga bilaabo 4 Abriil 2020, rakaab xiran majiro lama aqbali doono in ay taraan iyo basas ku raacaan Eskişehir. Bayaanka ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaaladu waa sidan: “Muwaadiniinta qaaliga ah ee qaaliga ah, [More ...]
BURULAŞ, oo ah aasaasida Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, ayaa ku dhawaaqday in la kansalay kaararka gaadiidka dadweynaha ee dhalinyarada ka yar 20 sano. Marka la eego cabirrada fayraska corona, sida muwaaddiniinta ka weyn 65 sano, dhalinyarada ka yar 20 sano [More ...]
Kooxaha Dawladda Hoose ee Magaalooyinka waawayn ayaa mucaawano lacag la’aan ah u qaybiyay muwaadiniinta khadka tareenka, gawaarida gaadiidka dadweynaha, goobaha suuqyada iyo xaafadaha magaalada marka loo eego 'dadaalka lagula dagaallamayo coronavirus'. Codsiga waxaa sameeya kooxaha waaxda arrimaha caafimaadka, Bursaray Şehreküstü [More ...]
Daraasadaha GAZİRAY dartiis, İpekyolu TEDAŞ Meesha waa xiran tahay Gaadiidka; Dowlada Hoose ee Gaziantep ayaa ku dhawaaqday in goobta TEDAŞ ee İpekyolu ay si kumeelgaar ah u xirnaan doonto taraafikada sababtoo ah daraasadaha GAZİRAY ee ay fulisay Dowlada Hoose ee Magaalada Gaziantep, D-400 [More ...]
Kadib markii Madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqay inay qasab tahay in la xiro maaskaro meelaha shacabka ah, ayaa hadal muhiim ah ka soo baxay Dowladaha Hoose ee Magaaladda Istanbul iyo Ankara. Labada degmoba waxay cadeeyeen in kuwa masar la’aan ahi isticmaali karin gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Rakaabka isticmaalaya nidaamyada tareenka fudud iyo basaska loo isticmaalo gaadiidka dadweynaha ee magaalada dhexdeeda SAMULAŞ A.Ş waxaa sidoo kale laga rabey inay xirtaan maaskaro. Maayarka Magaalada metela ee Mustafa Demir ayaa yidhi, “Dhamaan wadajirka Samsun [More ...]
Shilkii tareenka ee ka dhacay Çorlu, ayaa maxkamad kale loo gudbiyay dacwad kale oo ka dhan ah masuuliyada guud sababtuna tahay ereyadeedii hooyadeed M tosra Öz Sel, oo ay ku weyday wiilkeedii Oğuz Arda Sel, gudiga maxkamada. Meel ku Dhig Runta Dheer [More ...]
IMM waxay Muwaadiniinta u qeybisaa Gaadiidka Dadweynaha
Kadib xiritaanka qasabka ah ee waji xidhka meelaha bulshada, IMM waxay billowday qeybinta 100 oo maaskaro meesha ugu horeysa ee basaska, metro, metrobus iyo firiisooyin, sida uu madaxweynaha Ekrem İmamoğlu sharxay. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, [More ...]
Waa mamnuuc in la raaco gawaarida dadweynaha ee aan xirneyn ee Kocaeli
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo ka dhan ah cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan coronavirus (Covid-19) oo shalay lagu soo saaray war-saxaafadeed. Xaaladda guud, muwaadiniinta ayaa laga mamnuucay inay raacaan gaadiidka dadweynaha ee aan xirneyn. Marka la eego baaxadda sharciga ee bilaabmay ilaa maanta, Kocaeli [More ...]
Laba maalmood usbuucii Xaddidid Xarumo Dhaqida Gawaarida ee Izmir
Kordhinta isticmaalka biyaha magaalada sababta oo ah halganka ka dhanka ah coronavirus wuxuu ku qasbay degmada İzmir Magaalo Weynta inay kaalin muhiim ah ka qaadato. Iyada oo la raacayo muhiimada ay leedahay xakamaynta isticmaalka ilaha biyaha ee dagaalka lagula jiro fayraska, ayaa ah kuwa ugu badan [More ...]
Daraasadda Sahaminta Jiritaanka Coronavirus ee ESO waa la soo gabagabeeyey
Sahankan oo ay sameeyeen Rugta Wershadaha ee Eskişehir oo ay weheliso warshadeeyaheena oo muujineysa rajooyinka ganacsiga ganacsiga Eskişehir ee bilaha Abriil, Meey iyo Juun waa la soo gabagabeeyey. “Igu Kalsoonaada Dhakhaatiirta Turkiga” Mustafa Kemal ATATÜRK Warshadaha ayaa ku aaminay Xirfadlahooda daryeelka caafimaad. [More ...]